Cape Mamita ny dingana voalohany amin'ny famoronana ny lakandrano - Blog Ellicott Dredges
Source: Breeze isan'andro any Coral
Ny tanàna sy ny orinasa mpitrandraka dia nahavita ny dingana voalohany amin'ny drafitra maoderina amin'ny fitantanana dredging manerana ny rafitry ny lakan'ny tanàna.
Michael Ilczyszyn, mpitantana ny orinasa, sy ny Jack Adams avy amin'i Gator Dredging dia nanao fampisehoana tany amin'ny City Council nandritra ny atrikasa ny alatsinainy teo amin'ny efitrano fandraisam-bahiny tao amin'ny City Hall ho an'ny teti-dratsiny hanilihana ny Quadrant Atsinanana.
Ny fampisehoana manontolo, pejy 179 rehetra, azo jerena amin'ny Internet. Adams sy Ilczyszyn no nanasongadina ny filankevitra.
Ny quadrant atsimo atsinanana, misy lakandrano 349 antsoina amin'ny lakandrano 115 kilaometatra dia eo atsimon'ny Hancock Bridge Parkway ary atsinanan'i Santa Barbara Boulevard ary hangonina, manomboka amin'ny fiandohan'ny volana aprily, mandritra ny telo taona.
Ny quadrant atsimo atsinanana, izay tsy nitrandrahana tao anatin'ny 20 taona latsaka kely, dia tokony hofenoina amin'ny famatsiam-bola ankehitriny, ary amin'ny fomba azo atao dredging, hoy Ilczyszyn.
Ao anatin'izany rehetra izany, ny tsiran-tsoavaly 42,868 dia antenaina fa hoentina avy any ambanin'ny lakandrano mba hamerenany indray ny halalin'ny lalana.
Ny fanaovana tsiroan-tsofina sy famakafakana dia natao tamin'ny toerana dimy nandritra ny quadrant.
Ny dredge Ellicott® Brand 300 SL Swinging Dragon® dia ampiasaina ao amin'ny rafitry ny lakandranon'i Cape Coral.
Ny lakandrano atsimo atsinanana dia samy nenoina avokoa ary ny lakandrano 53 izay manitatra ny 19 kilaometatra na mihoatra ny halavany dia mila famotopotorana momba ny hydrografika.
Ny lahasa valo notontosaina nandritra ny drafitry ny tompona dia nahitana ny fanamafisam-peo lakandrano, ny angon-drakitra, ny fanadihadihana hidrikanika, ny fitanana sediment, ny toerana misy ny orana, ny haavon'ny serivisy, ny fampandrosoana ny drafitra ary ny tatitra.
Ny mpikambanan'ny Filankevitra Chris Chulakes-Leetz dia nanana ahiahy mikasika ny drafitry ny tompo, toy ny fomba hanangonam-bola ny fanodinana ary inona ny faharetany alohan'ny tokony hitobiana azy io indray.
Nilaza i Ilczyszyn fa avy amin'ny $ 1million ka hatramin'ny $ 1.2 tapitrisa mankany amin'ny tanàna no aloa mandritra ny fanodinkodinana isan-taona ary hitondra ny 15-20 taona talohan'ny nialan'ny quadrant indray.
Leetz dia niahiahy ihany koa amin'ny fandrafetana ny fitanana tsiro ao ambanin'ny lakandrano.
"Tsy silty sy avo lenta amin'ny dredging ity," hoy i Adams. “Tsy nanao famakafakana simika izahay satria raha tsy nampihetsiketsika izany dia tsy ho fantatray ny firafitry ny simika.”
Nilaza ny mpanolotsaina Marty McClain fa maniry ny fandaharam-pandrindrana izy ary nanontany koa raha azo atao ny mandoto ny rano any afovoan'ny lakandrano. Adams sy Ilczyszyn nilaza fa samy afaka.
Ny tanjon'ny dredging dia ny fampiroboroboana ny fantson-drano mety, ny fanalefahana ny tondra-drano, ny fahafaha-mivezivezy mandritra ny rivo-doza sy ny fihodinan'ny rano, hanatsarana ny tontolo tontolo iainana ary manome rano fisotro madio.
Naverina navoaka Breeze isan'andro any Coral
Atombohy miaraka amin'i Ellicott ny tetikasanareo amin'ny fitrandrahana ny lakandrano